मेरै कार्यकालमा भारतले कालापानी र लिपुलेक फिर्ता गर्नेमा विश्वस्त छुः प्रधानमन्त्री ओली « Dainiki
१५ भाद्र २०७७, सोमबार १४:४८
मेरै कार्यकालमा भारतले कालापानी र लिपुलेक फिर्ता गर्नेमा विश्वस्त छुः प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पत्रकार ऋषि धमलालले लिएको अन्तर्वार्ताको विस्तृत यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक कुरा गर्न गइरहेका छौ । आज हाम्रो बीचमा देशका सफल प्रधानमन्त्री, कुशल राजनेता र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ ।
त्यस सहमतिलाई कसरी अगाडि जाने त ? त्यसका आधारहरु कस्ता हुन सक्छन् ? हामीले आफ्ना रायहरु पनि बनायौं । र, ती रायहरुलाई व्यवस्थित गर्न हामीले कार्यदल गठन ग¥यौं र हामीलाई सहयोग पु¥याउनका लागि खासगरी दुई अध्यक्षलाई एकताका यी प्रयासहरुमा सचिवालय र स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावहरु तयार गर्दै कसरी अगाडि बढ्ने ? यो फाटोतर्फको प्रयास होइन, यात्रा होइन । एकता र मिलनतर्फको यात्रा, सकारात्मक बाटोतिरको यात्रा कसरी अगाडि बढाउने त ? भन्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव गर्न कार्यदल बनायौं । कार्यदलले मेहनतपूर्वक आपूmले प्रस्ताव तयार ग¥यो ।
अनि हामी दुई अध्यक्षलाई दियो र हामी छिट्टै नै सचिवालयको बैठकबाट यसलाई आवश्यक परे परिमार्जनसहित नत्र जस्तो छ यस्तै अथवा जुन रुपमा हुन्छ, त्यसले जसरी अगाडि बढाउँछ र सम्भव भए हामी स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्छौं । कोभिड–१९ को महामारी फैलिँदो छ । यस्तो अवस्थामा कुनै हेल्च्क्राइ वा जबरजस्ती गर्न सकिदैन । त्यस्तो भयो भने हामी सचिवालयबाट टुंग्याएर बस्न सम्भव भएको बेला स्थायी कमिटीबाट त्यस निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने काम गर्दै अगाडि बढ्छौं ।
– तपाईंलाई एउटा कुरा बताऔं । मैले पद्धति उल्लंघन गरेकोे कुरा प्रतिवेदनमा आएको छैन । पद्धतिसम्मत ढंगले सबै चल्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । अब अहिले पद्धतिको बहस गर्न थाल्ने हो भने वातावरणलाई जसरी हामीले सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन खोजेका छौं, त्यसमा सहयोग नपुग्न सक्छ । त्यसमा म यो च्याप्टर (विषय) ओपन(खुला) गर्न चाहन्नँ । प्रक्रियासम्मत ढंगले, विधिसम्मत ढंगले, अनुशासित ढंगले पार्टी चल्नुपर्छ । पार्टी भनेको विचारबाट निर्माण हुने हो ।
गुटबन्दी पार्टीमा गर्नुहुँदैन । गुटका बैठक र भेलाहरु गर्नुहुँदैन । यी सबै कुराहरु उचित होइनन् । र, अब त्यस्तो बाटोबाट होइन, ठीक विधि प्रक्रियासम्मत बाटोबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्ष हो । सरकार ठीक ढंगले चलेको छ । केही अगाडि मात्रै केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सरकारका कामको समीक्षा गरेकोे छ । अब कतिबेला कसलाई मन पर्दैन भन्ने त त्यो बेग्लै कुरा हो । तर अलिक अगाडि समीक्षा भएको छ । फेरि अहिले यस प्रतिवदेनले पनि संक्षिप्त समीक्षा गरेकै छ । त्यसकारण अब यसलाई विवादको विषय बनाउने होइन । विवाद टुंग्याउने बाटोतर्फ हामी अग्रसर भइरहेका छौं । त्यही बाटोमा अगाडि बढ्नु पर्छ ।
पहिले सिस्टम अफ गर्भनेन्स् के हो भनेर बुझ्नु प¥यो । निर्णय कहाँबाट हुन्छ र कसरी हुन्छ ? यस प्रणालीमा त्यो थाहा पाउनु प¥यो । प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्छ । सबैका कुरा सुन्छ । राय लिन्छ । बाहिर बुद्धिजीबीहरुसँग लिन्छ । सरोकारवालाहरुसँग लिन्छ । स्टेकहोल्डरहरुसँग लिन्छ । परामर्श थुप्रैसँग लिन्छ । मैले परामर्श अरु दलहरुसँग लिने गरेको छु । प्रतिपक्षी दलहरुसँग लिने गरेको छु । अरुसँग पनि लिने गरेको छु । र, ती सबै कुराहरुलाई लिएर फेरि पार्टीमा परामर्श गर्ने गरेको छु, छलफल गर्ने गरेको छु । अब सरकार र पार्टी एउटै होइन । त्यहाँनेर भिन्नता छ । त्यस भिन्नताअनुसार चल्छ । यो कुरा हामीले थाहा पाएर नै अगाडि बढ्नु पर्छ ।
– त्यस्तै पनि होइन । किनभने प्रधानमन्त्री म हो, पार्टी पनि सम्झदारीका साथ नै चल्छ । सरकार पनि सम्झदारीका साथ चल्छ । एउटा प्रश्न के हो भने पार्टीमा अध्यक्ष दुईवटा छौं, दुईवटा अध्यक्षले अथोरिटी एक्ससाइज गर्छन । तर, सरकारमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्री एक्लैले अथोरिटी एक्सरसाइज गर्ने हो । यसको अर्थ यो होइन कि सरकार मैले एक्लौटी ढंगले, आफ्नै ढंगले वा मनपरी गर्छु भन्ने होइन । यद्यपि प्रधानमन्त्री अथोरिटीसहित हुन्छ । त्यो कुनै रवरस्ट्याम्प होइन । यसले सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित ससदबाट जनप्रतिनिधिहरुबाट प्राप्त जनताको त्यो अधिकारसमेत पठाएर प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सहयोगी मन्त्रिपरिषद् बनाउँछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको हैसियतमा देश संचालन गर्छ । यसो गरिरहँदा यता पार्टीमा र पार्टीका नेताहरुको भूमिका हुँदैन वा अर्का अध्यक्षजीको भूमिका हुँदैन, प्रचण्डजीको भूमिका हुँदैन भन्ने होइन, भूमिका हुन्छ । उहाँ र म छलफल गछौं, पारस्परिक परामर्श, सल्लाह र सहमति गरेर, त्यस बाटोबाट अगाडि जान्छौं सरकार संचालनको सम्बन्धमा पनि यो गर्छौं । तर, उहाँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा होइन । एउटा अध्यक्षको हैसियतमा त्यसमा उहाँले रुचि राख्नुहुन्छ । नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा अनौपचारिक ढंगले सहमति जनाउनु हुन्छ, सहमतिमा जानुहुन्छ, छलफलमा भाग लिनुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले संचालन गर्छु । उहाँले कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले गर्नुहुन्छ । मैले उहाँसँग छलफल गर्छु । उहाँले पनि मसँग छलफल गर्नुहुन्छ, अनि सहमतिका साथ पार्टी चलाउनु हुन्छ ।
– यो एकता गरेको एकछिनका लागि मात्रै होइन । यो एकता अलिपरसम्म जाउँ अनि आआफ्नो बाटो लागौंला भनेर पनि गरिएको होइन । यस देशमा परिवर्तन ल्याउनका लागि गरिएको थियो । मैले आफ्नो भनाइ राख्न सक्छु, यस देशमा अग्रगामी परिवर्तनको गतिलाई निरन्तरता दिन, यहाँ स्वच्छता, पारदर्शिता र सुशासन कायम राख्दै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निमूर्लन गर्दै, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै, विकास निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै अगाडि जान यो आवश्यक ठानिएको हो । देश बनाउनका निम्ति स्थायित्व र स्थिरता चाहिन्छ । त्यसका निम्ति ६ वा ९ महिने सरकार होइन ।
एक निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनसम्मको पाँच वर्ष अवधिको लागि सुस्थिर सरकार चाहिन्छ । अर्को, त्यसमा पनि नीतिगत रुपमा अझ उत्तरदायित्वका प्र्रश्नमा त्यो निरन्तरता होस् भन्ने कुरा, त्यसको सुनिश्चितता गर्न राम्रो बहुमत चाहिन्छ । यसर्थः यो एकता एकछिनको लागि गरिएको वा अलि परसम्मकोे यात्राका लागि गरिएको होइन । यो देशलाई पछौंटेपनबाट अगाडि बढाएर विकासित देश बनाउने उद्देश्यका साथ, बिकृतिहरु हटाएर बिकृतिरहित एउटा सुसभ्य, सुसंस्कृत र समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्न, अशिक्षा हटाएर सुशिक्षित नागरिकहरुको देश बनाउन र रोगब्याधी हटाएर निरोगी नेपाल निर्माण गर्न हो । यी तमाम् उद्देश्यहरुका साथ चौतर्फी विकास, अनेक क्षेत्रको तीब्र विकासलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ अघि बढ्न वा यी उद्देश्यहरु पूरा गर्न स्थायित्व र स्थिरता चाहिन्छ । त्यसका निम्ति सुदृढ सरकार चाहिन्छ ।
अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन चैतमा हुने भनेर भनिएको छ । त्यो कति समभव छ, हेर्न बाँकी छ । किनभने, कोरोनाको कहर कसरी अगाडि बढ्छ ? त्यसपछि मात्रै एउटा निर्णय होला ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू । अहिलेको अवस्थामा तपाईं र प्रचण्डको बीचमा सहमतिकै साथ अगाडि जाने एउटा सहमति भएको छ । हस्ताक्षर तपाईं दुबै अध्यक्षले गर्नुभएको छ । पार्टीको महाधिवेशनपछि नेतृत्वको चयन पनि सहमतिकै आधारमा हुन्छ ? महाधिवेशनपछि प्रचण्ड नै अध्यक्ष बन्नुहुन्छ पार्टीको कि तपार्इं बन्नुहुन्छ फेरि पनि ?
मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर अहिले मन्त्रिमण्डल पुनःगठनको कुरा कति जायज र कति समभव छ ? यो अहिलेको आवश्यकता कति हो ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं प्रधानमन्त्री भएको साढे दुई वर्ष भयो । अब तपाईंले समीक्षा गरिरहनु भएको छ । मन्त्रिमण्डल पुनःगठन गरेर राइट टाइममा राइट गोल गर्न तपाईं तयार हुनुभएको हो ?
– नेपालमा मात्रै यस्तो हुन्थ्यो भने त विरोधीहरु चम्किएर बस्नुखानु हुँदैनथ्यो । तर यो विश्वव्यापी रुपमा, महामारीको रुपमा आएको अत्यन्तै घातक र संक्रामक रोग कोभिड–१९, जसले मानव जातिको भविष्यलाई हल्लाइदिएको छ । आज मानव जीवनलाई थर्कमान बनाएको छ । आज अर्थतन्त्रलाई बहुतै गम्भीर समस्यामा हालेको छ । र, यसले भविष्यमा कस्तो रुप लिन्छ ? त्यो अझैं टुंगो लागिसकेको छैन । यसको समाधान कहिलेसम्म हुन्छ ? यो अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।
अर्को कुरा, गरिब धनी केही नछुटाइकन कोभिड–१९सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार चाहे आइसोलेशनमा राखोस्, क्वारेन्टिनमा राखोस्, उपचार गराओस्, हस्पिटलमा राखोस्, पीसीआर टेस्ट गरोस्– यी सबै त सरकारले बेहोरेको छ । अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने, खर्च बढ्ने, तर सरकारले त्यसबापतको सम्पूर्ण खर्च बेहोरेको छ । यो असाधारण कुरा होइन र ? हाम्रै छिमेकमा यस्तो हुन सकेको छैन । हाम्रै छिमेकका देशहरुमा यस प्रकारकोे व्यवस्था गरिएको छैन । तर हामीकहाँ यसप्रकारको व्यवस्था छ । लकडाउन सुरुमा गरियो । लकडाउन गरिञ्जेलसम्म सुरुमा समस्या नियन्त्रणभित्रै थियो । सधैं लकडाउन गर्ने कुरा पनि भएन ।
लकडाउन सुरुदेखि नै तोड्नुपर्छ भन्ने उत्ताउला कुराहरु, गाडीमा मान्छे आउनुस, गाडीबाट हामी पठाउँछौं, हामी ल्याउँछौं भनेर भनेको सुनिने यस्ता खालका प्रवृत्तिहरु देखिएकै थिए । र, कसले कारबाही गर्छ हेरौं भन्ने, हामी अवज्ञा गछौं भन्ने खालको अराजकता पनि थियो । सरकारले यो कसका लागि आदेश जारी गरेको छ ? यी प्रबन्धहरु कसका लागि गरेको छ ? यो कुरा नबुझ्ने, अनि मान्दैनौं भन्ने ? इनफ इज इनफ भनेको होइन ? इनफ इज इनफको के अर्थ हो ? कोभिड–१९ अब पुग्यो फिर्ता जा भनेको हो कि ? के भनेको हो इनफ इज इनफ ? रकम तल पठाइयो ।
– किन परिणाम जनताले पाएका छैनन् ? सरकारले यति व्यवस्था नगरेको भए त भयावह स्थिति उहिले नै भइसक्नेथियो । यो त बढेर आतंकको एउटा भयानक रुपमा परिसक्दथ्यो । कति जनाको ज्यान जान्थ्यो ? अहिले कति सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ ? कति सेनालाई ? कति प्रहरीलाई ? कति सशस्त्र प्रहरीलाई ? कति स्वास्थ्यकर्मीलाई ? कति डक्टरलाई ? कति नर्सलाई ? उनीहरु चुप्प लागेर घरमै बसेको भए त कोरोना सर्दैनथ्यो होला नि ! उनीहरु त आपूm एक्सपोज भएर उपचार दिँदाखेरी आफ्नो ज्यान नै खतरामा परेको छ । अनि आपूm उपचार दिँदा ज्यान खतरामा पारेर, आफ्नो ज्यान गुमाएर उपचारमा संलग्न हुनेहरुप्रति कृतज्ञ हुनुपर्दैन ?
अनि सरकारले केही पनि गरेन ? सेनाले के रहरले त्यहाँ गएर आफूलाई संक्रमण गराएर फर्किएको हो त ? प्रहरीले त्यहाँ संक्रमण गराएको किन हो ? सडकमा यस्तो घाम, यस्तो पानी दुईवटै अवस्थामा सडकमा तपाईंले प्रहरी देख्नुभएको छ, त्यस ठाउँमा आपूm उभिनु परेको भए के हुन्थ्यो ? जुनसुकै जोखिम मोलेर सेना प्रहरीले काम गरिराखेका छन् । त्यो काम देख्नुपर्दैन ? अनि सरकारले केही पनि गरेन ? सरकार भनेको के हो त ? कर्मचारीहरु खटिराखेका छन्, यस्तो अवस्थामा सेवा प्रवाह गरिराखेका छन्, यस्तो अवस्थामा सेना खटिराखेको छ, प्रहरी खटिराखेको छ, सशस्त्र प्रहरी खटिराखेको छ, कर्मचारी खटिराखेका छन्, डाक्टर खटिराखेका छन्, नर्सहरु खटिराखेका छन्, स्वास्थ्यकर्मी खटिराखेका छन् । दिन भनेका छैनन्, रात भनेका छैनन्, निन्द्रा भनेका छैनन्, भोक भनेका छैनन्, शून्यप्रायः स्थितिबाट दैनिक २३ हजार टेस्ट हुनसक्ने क्षमता र पूर्वाधार बनाइएको छ । कुनै पोजिटिभ केस पाइयो भने कोसँग सम्पर्क थियो भनेर टे«सिङ हुन्छ, खोजी हुन्छ । कोसँग सम्पर्क भएको थियो, त्यहाँसम्म गएर फेरि टे«सिङ गरी खोजी गरेर स्वाव टेस्ट गरीगरी बिमारी छ कि छैन भनेर हेरिएको छ । संक्रमण फैलिन नपाओस् भनेर यस्ता विधिहरु अपनाइएको छ ।
– अवश्य, यो कोभिड–१९ आउला भन्ने तयारी त थिएन । पोहोर साल, परार साल तयारी गर्नुपर्दथ्यो कोभिडको ? यो संसारमा कोभिड–१९ आउँछ भनेर कोही ज्योतिषले पनि भविष्यवाणी गरेको मलाई थाहा छैन। कुनै साइन्टिस्टले पनि कोभिड आउँदैछ है भनेर भनेको थाहा छैन । यो विश्वका कुनै पनि देशले पूर्वतयारी गरेका थिएनन् । बिना पूर्वतयारी कोभिड आइलाग्यो दुनियाँभरि अमेरिका, रुस, चीन, जापान, भारत, नेपाल, बंगलादेश, कोरिया, ब्राजिल, स्पेन, इटाली, पेरु, जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतमा कहीँ पनि पूर्वतयारी थिएन । यो अचानक आयो । यो आतंकका रुपमा आयो । आतकंका रुपमा फैलियो ।
कोभिडको पूर्वतयारी थिएन, अच्छा, म प्रधानमन्त्री नभएर अरु कोही भएको भए दुई तीन वर्ष अगाडिदेखि तयारी गरेर राख्नुहुन्थ्यो कोभिडको ? आइसोलेशन क्याम्पहरु बनाएर राख्नु हुन्थ्यो ? अथवा क्वारेन्टिनहरु बनाएर राख्नु हुन्थ्यो ? यसप्रकारको आलोचना र विरोधको केही अर्थ हुँदैन । यस्ता आलोचनाको कुनै आधार र दम नै छैन । सरकारले पूर्वतयारी गरेन भनिरहँदा आग्रहपूर्ण हुँदोरहेछ । अनि कुनचाहिँ ज्योतिषीले पूर्वतयारी गर्दथ्यो ? हामीले देशको स्वास्थ्य पूर्वाधारको विद्यमान स्थितिमा सामान्यतया सुधार गरिराखेका थियौं । हाम्रा स्वास्थ्य नीति ठीक छन् । फेरि पनि हामीले जनताको इम्यून सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ, निरोगी नेपाल बनाउनु पर्छ ।
निरोगी नेपाल बनाउने भनेको उपचार गरेर होइन, निरोगी बनाएर हो । पहिले जनतालाई निरोगी बनाउनुपर्छ यसका अनेक उपायहरु छन्, विधिहरु छन् । जनतालाई निरोगी बनाउनु पर्छ । अब निरोगी भयो भने प्रजनन्का बेला सेवा उपलब्ध गराउने, ट्रमा दुर्घटना इत्यादि केहीँ हुँदा, कोही मान्छे आफैँ पनि यसै लडेको हुन्छ, कोही बेहोस भएको होला, त्यसमा लडेको होला । कसैको मुटुको बिरामी होला, कसैको के होला बिरामी पनि अनेक प्रकारका निस्कन्छन्। भरसक निस्कन नपाओस् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । खानपान, वातावरणआदि सबै कुरा र व्यायाम(एक्सरसाइज) सबैको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ ।
आरामको सन्तुलन, खानाको सन्तुलन, व्यायमको सन्तुलन अथवा काम, खाना र आरामको सन्तुलन गर्नुपर्छ । खाना भन्ने बित्तिकै स्वस्थ खाना, उचित खाना, उचित समयमा खाना, उचित मात्रामा पौष्टिक खालको खाना– यी कुराहरुमा ध्यान जाला । व्यायाममा सन्तुलन भनेको उपयुक्त विधिका साथ, उपयुक्त तरिकाले, उपयुक्त समयमा गरिने व्यायम र धेरै पनि होइन, थोरै पनि होइन, ठीक मात्रामा व्यायाम, ठिक्क परिश्रम, ठिक्क काम यो होला । आरामभन्दा यति घन्टा यस्तो, यसरी आराम गर्नेभन्ने ढंगले होला । यी सबै कुराको सन्तुलनका साथ निरोगी व्यक्ति बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । अनेक कारणले आज समस्या हुने गरेको छ, जस्तोकि मुटुका समस्या हुने गरेका छन्, ती नहोऊन् । जे कारणले फोक्सोका समस्या हुने गरेका छन्, ती नहोऊन, जे कारणले कलेजोका समस्या हुने गरेका छन्, ती पनि नहोऊन, किड्नीका समस्या हुने गरेका छन्, ती नहोऊन, पेटका, आन्द्राका, ग्याष्ट्रिकका र अल्सरका समस्या हुने गरेका छन् भने ती पनि नहोऊन । यसका लागि पहिले नै समस्या हुन नपाउनेगरी स्वच्छ वातावरणदेखि सबै कुरा मिलाएर निरोगी नेपाल बनाउन लाग्नुपर्छ ।
– कति किन्ने ? कति बनाउने ? कतिलाई सर्छ ? यो जति फैलिदै जान्छ, हामीले त्यति क्षमता बढाउन ध्यान दिनुपर्छ । नेपालमा कतिवटा हस्पिटल बनाउने ? सबै जनता वा आधा जनतालाई राख्नेगरी वा एक चौथाई जनता कतिलाई हस्पिटलमा राख्नेगरी अस्पत्ताल बनाउने ? भेन्टिलेटर कति संख्यालाई, कति प्रतिशत २०, २५, १५, १०, ५, २ र १ वा एकभन्दा कम जिरो दशमलब समथिङ ? कतिलाई बनाउने ? कतिलाई चाहिँ संक्रमण हुन्छ भन्ने ? वा कतिलाई संक्रमण हुन दिन्छु भन्ने ? हाम्रो नीति त संक्रमण हुन नदिने हो । तर, खुला सीमा, बाहिरबाट ह्वात्तै आगमन, त्यसबाट विस्तारै विस्तारै संक्रमण भएको अवस्थालाई हामीले रोक्नै सकेनौं । रोक्न खोजेको त हो ।
लामो समय हामीले रोक्न खोज्यौ र सफलताका साथ अडियौं पनि । त्यतिबेला त यो ठूलोे समस्याको कुरा थिएन । लामो समयसम्म त एकजना पनि मर्न पाएको स्थिति थिएन । हामीले मर्न दिएका थिएनौं । दुनियाँमा जहाँ लाखौंको मृत्यु भइसकेको छ । हामीले एकजना पनि मर्न दिएका थिएनौं । समुदायमा संक्रमण हुनै दिएका थिएनौं । जसमा संक्रमण आयो, त्यसैमा सीमित राखेका थियौं । तर, अब जनतामा सचेतनताको कमी र अझ अरु केही कारणहरुले गर्दा संक्रमण समुदायमा पनि फैलिन पुगेको छ ।
– पोलिटिकल मान्छेहरु एक ठाउँमा जम्मा भएर यो कोरोनालाई हामी सबै पोलिटिकल पार्टीहरु मिल्यौं भनेर भन्दिने ? एउटा साझा संयन्त्र बनायौं अब स्टप कोरोना भनेर आदेश गर्ने ? सबै पार्टीहरुले संयुक्त वक्तव्यद्धारा आदेश जारी गर्ने कोरोनालाई ? त्यसो गर्नु ठीक हुन्छ कि सरकारले गर्ने काम प्रभावकारी ढंगले गरेकोमा साथ सहयोग गर्ने ? स्वास्थ्य क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन, परिचालन, उपकरण, औषधिहरुको व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन आइसोलेसन आदिको व्यवस्थापन हल्ला गरेजस्तो कहाँ के पुगेको छैन ? क्वारेन्टिन पुगेको छैन ?
क्वारेन्टिनमा बस्न नपाएको कहाँ छ ? अरु देशहरुमा त घरघरमा सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस भनेको पाइन्छ । कतिवटा देशले उपचार खर्च एक पैसा कसैका लागि पनि गर्दैनन् । संक्रमण देखियो भने हस्पिटल जाऊ, जचाऊ, खर्च गर, निको भएर आऊ भनेका हुन्छन् । तर, हामी त्यसभन्दा बेग्लै स्वास्थ्य नीतिका साथ काम गरिरहेका छौं । यसमा अलिकति सुधार गर्नुपर्ने हुन सक्ला । जसको कोही छैन, त्यसको सरकार छ । जो आफै सम्पन्न छ, उसले उपचारमा खर्च गर्नसक्छ ।
– होइन, परिवर्तन त्यस्तो संरचनामा गर्नुपर्ने होइन । नयाँ केही संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने, इक्युपमेन्ट थप्नुपर्ने र अरु स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई त्यसमा तालीमका साथ डाइभर्ट गर्नुपर्ने केही थप प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर, त्यसबाहेक अर्को कुनै पृथक प्रणाली, पृथक विधि वा त्यस्तो अलग रणनीति ल्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाईचाहिँ लागेको छैन । यिनै चिजहरुलाई जस्तो आइसोलेसन हामीले भनेका छौं । म जनतालाई, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, दूरी कायम राखौं । कमसेकम दुई मिटरको दूरी कायम राखौं । अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गरौं ।
अहिले हामीले दुई मिटरभन्दा बढीको दूरी कायम राखेका छौं । एकजना तपाईंले मास्क लगाउनु भएको छ, त्यसकारण मैले मास्क खोलेको छु । एकजनाले लगाउँदा यो अलिकति प्रोटेक्टिभ भयो । दुई जनाले लगाउँदा अझ प्रोटेक्टिभ हुन्छ । यो दूरीमा पर्दैन भन्ने कुरा हो । अर्को तपाईं पनि स्वस्थ नै हुनहुन्छ, म पनि स्वस्थ छु । नत्र सामन्यतया अलिकति नजिक जानुप¥यो भने, अथवा कुरा गर्दा, बोल्दा र स्वासप्रश्वास गर्दा आएका छिटाहरु अथवा केही बबलहरु उडेर जाने स्थानसम्म छ भने त्यस्तोमा होशियार हुनैपर्छ । यसमा साबुनपानीले हात धुने महत्वपूर्ण कुरा हो । यी कुराहरु गरिएको छ र अर्को कुराचाहिँ मैले भन्ने गरेको छु, औषधीय गुणयुक्त खाना हामीले खाने गरेका छौं । त्यसमध्ये केही चिजहरुमा यस्तो परिस्थितिमा अलिक बढी जोड दिने गर्नुपर्छ । मैले यो भनेको छु । जस्तो के भने तातोपानी र बेसार प्रयोगमा…।
– हुन्छ । तर यसमा के छ भने जसरी दुनियाँमा आउँदैछ र विश्व स्वास्थ्य संगठनको भविष्यवाणी छ, अझै अलिकति अप्ठ्यारो समय आउन पनि सक्छ । विश्वमा संक्रमितको संख्या बढिराखेकै छ । संख्या बढ्यो भनेको त यो घट्यो भने पनि बढी राखेको हुन्छ । जस्तो हामीकहाँ यदि एक हजार दैनिक बढेको छ भने भोलि पाँच सय दैनिक बढ्दा पनि त्यसै संख्यामा थपिने हो । भोलि फेरि दुई सय संख्यामा झ¥यो भने पनि त्यसै संख्यामा थपिने हो । र, बढ्दै गएको देखिन्छ । बढेको त होइन, घटेको हो । बिमारीको संख्या घट्दो छ, तर जम्मा संक्रमितको संख्या त त्यसैमा थपिने हो ।
हिजो यदि २५ हजार पुगेको थियो भने एक हजारका दरले बढ्दा २५ हजार पुगेको थियो भने आज ५ सयका दरले बढ्दा २५ हजार ५ सय हुन जान्छ । भोलि ३ सयका दरले बढ्दाखेरी २५ हजार ८ सय पुग्छ । अर्काे दिन २ सयका दरले बढ्दाखेरी २६ हजार पुग्छ । घट्न त घटिराखेको छ, हजारबाट दुईसयमा झरेको छ । तर, जम्मा संख्यामा के छ भन्दा २६ हजार पुगेको छ । त्यसकारण यस्तो हिसाबमा हामी धेरै अल्मलिनु हुँदैन । हामीहरु संख्या बढेको देखेर धेरै आत्तिनु पनि पर्दैन । तर अहिलेचाहिँ साच्चै संख्या बढिराखेको छ । बढेकै छ यो संख्या । किनभने प्रतिदिनको संख्या उच्च भइराखेको छ । अहिले ठूला शहरहरुमा सबैभन्दा बढी संक्रमण देखिएको छ । यो भयवह स्थिति हो ।
मैले पहिलेदेखि भन्दै आएँ, काठमाडौंमा भित्रिन दिनुहुँदैन । हामीले केही सावधानीहरु अपनायौं । घरबाट आउन पनि नदिने ? काठमाडौं आउन पनि नदिने, काठमाडौंबाट बाहिर जान पनि नदिनेइत्यादि धेरै अभ्यासहरु गरेकै हौं । तर केही व्यक्तिहरु जान्ने पल्टिए । धेरै मान्छेहरु जानकार निस्किए । जान पनि नदिने, आउन पनि नदिने, यसरी छेक्न पाइन्छ ? स्वतन्त्रता रोक्न पाइन्छ भनेर कराए ? त्यहीँ भएर मैले सुरुदेखि भनेँ लाइफ फस्ट, लिर्बटी सेकेण्ड । स्वतन्त्रता भनेको बाँच्यो भने मात्रै चाहिन्छ । बाँचिएन भने लिवर्टीको आवश्यकता नै पर्दैन ।
– आइस नै जमेको थिएन के को ब्रेक हुनु ! आइस जमेको भए बे्रक हुन्थ्यो । मानिसहरुलाई के प¥यो भने यो हाम्रो भूमि जो सुगौली सन्धिले काली अर्थात् महाकालीपूर्वको जमिन हाम्रो जमिन हो भनेर तोकेको छ छुट्याएको छ । सन् १८१६ देखि १९६२ सम्म १४६ वर्ष त्यो जमिनको हामीले भोगचलन पनि ग¥यौं । यातायात थिएन, संचार थिएन, त्यस्तो बेला, त्यस्तो जमानामा हामीले भारत–चीन युद्धका बेलासम्म निरन्तर भोगचलन ग¥यौं । भारतले चीनसँगको युद्धका बेला कालापानीमा फौज राखेछ । त्यो धेरै पछि मात्रै नेपाललाई थाहा भयो । किनभने, यातायात थिएन । संचार पनि थिएन । मिलिट्रीको संचार थियो भनेपनि उहाँहरुको मिलिट्री त्यहाँ बसेको थियो । हामीलाई थाहा भएन । त्यसकारण २०२६ सालमा उत्तरी चेकपोष्टमा, चेकपोष्ट भनेर हाम्रो उत्तरी सीमानामा भारतले मातृकाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा जुन सम्झौता गरेर १७ वटा चेकपोष्ट खडा गरिएको थियो, मिलिट्री चेकपोष्ट उत्तरी सीमानामा यसरी राखिनु एउटा लज्जाजनक कुरा थियो ।
हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको लागि त्यो लज्जाजनक कुरा थियो । त्यस विषयमा कुरा उठाइयो र २०२६ सालमा ती चेकपोष्ट फिर्ता गए । त्यसबेला कालापानीको चर्चा कसैले पनि गरेन । चर्चा नगरेको हुनाले रह्यो, नत्र ती १७ वटा २००८ सालमा राखिएको थियो भनेँ त्यसभन्दा पछि राखिएको यो २०२६ सालमा अरु फिर्ता गर्दा भर्खरै राखिएको बाँकी रहनुपर्ने हुदैनथ्यो । यो फिर्ता गर्न धेरै गाह्रो थिएन । सन् १९५२ मा राखिएको सकियो फिर्ता गर्न भने ५२ मा राखेको सकियो फिर्ता गर्न भने १९६२ मा राखिएको नसक्ने त कुरा थिएन, सकिन्थ्यो नै । तर, त्यसबेला यो कुरै उठेन । त्यसकारण १७ वटा पोष्ट फिर्ता भए, एउटा बाँकी रह्यो । यो भूभागको विवाद कुनै आवेश, उत्तेजना र कसैसँगको वैरभावको कुरै होइन । यो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतप्रतिको कुनै हाम्रो निहुँ खोजाइ हो र ? हाम्रो कुनै नचाहिने तर्क हो र ? हामीले नयाँ निकालेको विषय हो र ? हुँदै होइन । यो विषय अगाडिदेखि नै थियो ।
हामीले अलिकति चर्चा गर्दै आएका थियौं । तर, जब भारतले आँठौं संस्करण भनेर नक्सा निकाल्यो । त्यसमा हाम्रो जमिनसमेत सामेल गरेर निकालेपछि हामीले डिप्लोमेटिक नोट पठायौं । यो हाम्रो जमिनसमेत समेटेर निकालिएको नक्सा उपयुक्त भएन, हामीलाई मान्य छैन र हामी यसको समाधान वार्ताद्धारा गर्न चाहन्छौं, अबिलम्ब वार्तामा बसौं भनेर भन्यौं । हामीले यस्तो सन्देश पठायौं । पाँच महिनासमम त्यसको जवाफ आएन । बरु आयो बाटो उद्घाटनको कुरा । फेरि हामीले पठायौं, यो उपयुक्त भएन हाम्रो भूमिमा बाटो बनाउने, उद्घाटन गर्ने, हाम्रो भूमिसमेतलाई प्रयोग गर्ने कुरा र बाटो बनाउने कार्य उपयुक्त भएन । हामी संवाद गरौं भन्यौं । े लगातार हामीलसंवादबाट समाधान गर्न खोज्यौं । अझ हामीले नक्सा छाप्न पनि हतार गरेनौं । वार्ताबाटै समाधान गरौं, वार्तामै कुरा राखौं भन्यौं । वार्ताबाटै भइहाल्छ भने नक्सा छाप्नतिर नलागौं भनेर पर्खियौं । हामीले हतार गरेनौं । तर, त्यसको पनि जवाफ नआएपछि हामीले नक्सा छाप्यौं ।
नक्सा छापेपछि केहीले सम्बन्ध बिगा¥यो पनि भने । अनि के गर्नुपर्दथ्यो त ? हाम्रो जमिन छोडिदिनु पर्दथ्यो ? हाम्रो जमिन हामीले आफ्नो भोगचलनमा फिर्ता नल्याउने, त्यसलाई नक्सामा कायम नगर्ने, उतै भारतले नै प्रयोग गरोस्, किनभने मित्रराष्ट्र हो प्रयोग गरोस् न भन्नुपर्ने थियो त ? त्यत्रो विशाल भूमि भएको भारतले यति सानो हिमाली भेग जहाँ पाँचवटा गाउँ छन् । त्यसमध्ये तीनवटा गाउँ उता पारिएको छ । ती तीनवटा गाउँको कुरा मात्रै हामीले भन्यौं । ती तीनवटा गाउँ फिर्ता गरिदिन भनेका छौ । माथितिर त हिमाल छ, त्यो कसैले प्रयोग गर्न सक्दैन । काली किनारका तीनवटा गाउँचाहिँ फिर्ता गरिदिनका लागि भनेका छौंं । यो कहाँ अर्घेल्याइँ भयो र ? कहाँ सम्बन्ध बिगार्न खोजेको छ र ? अलिकति भारतीय मिडियाले केही अनावश्यक ढंगले उछाल्ने काम गरेको हो ।
– मर्यादाका सीमाहरु केही उल्लंघन भए । यो मर्यादाका सीमाहरु, सभ्यताका सीमाहरु हाम्रोजस्तो एउटा समाज जहाँ आफ्नो सभ्यताप्रति हामी गौरव गछौं । हामी शिस्टता, मर्यादा र सत्यनिष्ठाप्रति गर्व गछौं । यस सभ्य समाजमा कति हुनुपर्दथ्यो, पर्दैन्थ्यो ? त्यस ढंगले कुराहरु आए पनि हामीले वार्ता गर्ने भन्यौं । त्यसले परिस्थिति धेरै बिगारिएको छ तर हाम्रो तर्फबाट बिगारिएको होइन । उतैका मिडियाले बिगारेको हो । त्यसो भएर संवाद केही विलम्ब भएको थियो । अगस्ट १५ मा मैले फोन गरे, कुराकानी भयो । अब एउटा नयाँ अध्याए सुरु भएको छ । हामी गम्भीरताका साथ वार्ता गर्छौं । आआफ्ना तर्फका प्रमाणहरु प्रस्तुत गछौं । जमिन हाम्रो हो । हामीले फिर्ता पाउनु पर्छ भनेकै छौं । हामीले फिर्ता लिनुपर्छ । यसमा सम्बन्ध बिग्रियो, बिगारियो भन्ने कुरा हुँदै होइन । य
समा भारतप्रति हाम्रो कुनै वैरभाव छैन, दुस्मनी पनि छैन् । कुनै नकारात्मकभाव पनि छैन्, दृष्टिकोण पनि त्यस्तो छैन । यत्ति हो जानेर नजानेर जसरी होस्, सन् १९६२ देखि हाम्रो भूभाग भारतले भोगचलन ग¥यो । त्यतिबेला युद्ध थियो । युद्धका बेलाचाहिँ सैनिक ल्यायो होला । तर अरुको भूभागमा त्यत्रो विशाल भारतले यति सानो देशको छेउको किनाराको थोरै भूभागप्रति जो हामीले सन् १८१५मा युद्ध हारेपछि पनि त्यसलाई चाहिँ मिलाएर सीमाना निर्धारण ग¥यौं । त्यसपछि पनि अनेक सीमानाका प्रश्नहरु आए । ती सीमानाका प्रश्नहरुले हाम्रो त्यो भूभाग कायम नै रहदै आयो । १४६ वर्ष मैले भने नि, हामीले त्यस भूमिको भोगचलन गरेकै हो ।
–इतिहासमा कहिल्यै कसैले बनाउनुपर्छ भन्ने पनि नसोचेको ठाउँमा अहिले काम भइरहेको अवस्था छ । जस्तोकि छाङरु–टिंकर जाने बाटो जो पहरै पहरा छ, त्यसलाई खोलेर अहिले बाटो बनाइदै छ । कम्पिलिट हुन अलिकति बाँकी छ । अझै अलिकति पूरा भएको छैन । बाटो बनाउन थालेपछि अब मान्छेहरु त्यहाँ जान सक्ने त भयो । त्यहाँ गएर तमासासँग फोटो खिच्ने, तमासासँग विरोध गर्ने, त्यहाँ कोही मान्छे उभ्याउने अनि यस्तो हालत छ, के हे¥यो सरकारले भन्ने गरेको पाइन्छ । अहिलेको सरकारले त के ग¥यो भन्ने होइन, बाटो बनाउँदै छ, अहिलेको सरकारले बाटो बनायो । अहिलेसम्म त कसैले त्यहाँ बाटो बनाएको थिएन । अहिलेको सरकारले बाटो बनायो, राम्रो गर्न खोजिराखेको छ, हेलिकप्टरबाट खाद्यान्य पु¥याएको छ ।
अहिलेको सरकारले त हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्य पु¥याइराखेको छ । आवश्यक सामग्रीहरुको आपूर्ति हेलिकप्टरबाट पु¥याएको छ । केही अनुदानस्वरुप, केही अत्यन्त सस्तो मूल्यमा त्यसरी उपलब्ध गराएको छ । यो त पोजिटिभ कुरा हो भनेर देख्न प¥यो नि ! अनि यस्तोमा पनि विरोध गर्ने केही छन् । विरोधका लागि विरोध गर्ने ? सरकारले राम्रो काम गरिराखेको छ, काम राम्ररी नै गरिराखेको छ । नेपाली सेनाले त्यस्तो पहरामा ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिराखेको छ । धन्यवादको एकशब्द छैन ।
अहिलेको सरकारले गर्न थालेको छ, सेनाले यसरी गरिराखेको छ यस्तो पहरामा हामी त जान सक्दैनौं, सेना पनि त मान्छे हुन् । उनीहरुको पनि ज्यान नै हो । त्यहाँबाट फिस्लिक्क गयो भने त ऊ पनि तल महाकालीमा खस्छ । ज्यान भेटिदैन । हाडखोर केही बाँकी रहदैनन् । धुजाधुजा हुन्छन् । सेनाले त्यसरी काम गरिराखेको छ भने त्यसप्रति कृतज्ञताभाव हुनुपर्दैन ? गर्दैछ यसरी भन्नु पर्दैन ? त्यो देखाउनु पर्दैन ? यसरी गरेको छ, यसरी गरेको छ भनेर समाचार दिनुपर्दैन ? अनि खिचेर त्यहाँको भीर देखाउने ? यो प्रवृत्ति हावी छ । सरकारले राम्रो काम गरेको छ, यस्ता प्रतिकूलताहरुको सामना गरेको छ । त्यसको कुनै चर्चा नगर्ने ? अनि त्यसलाई नराम्रो ढंगले चित्रण गर्ने ? अहिले बाटो बनेको छ, अब यसको विरोध छ, बाटो अझै बनिसकेको त छैन । काम थाल्ने बित्तिकै बाटो बन्छ त ? बन्दैछ नि !
–सैद्धान्तिक रुपमा हाम्रो तहमा भएपनि नक्सा अगाडि राखेर, तथ्यप्रमाण अगाडि राखेर छलफल गर्ने कुरा त प्रधानमन्त्री स्तरमा गर्न भ्याउने र गर्ने कुरा भएन । हामी त छोटो समयका लागि बस्छौं । दुईदिन, तीनदिन, चारदिन वा पाँच दिन बस्नु पर्ला । विभिन्न तथ्य र ऐतिहासिक प्रमाणहरु हेर्नुपर्ला । जिद्दी नगर्ने हो भने प्रमाणहरु काफी छन् । प्रमाणहरुको एक झलक नै काफी छ ।
ऐतिहासिक तथ्यहरु नै काफी छन् । सुगौली सन्धिपछि हामीले १४६ वर्ष भोगचलन गरेको र त्यहाँ हाम्रो सहमतिबिना सैनिक राखिएको छ । सहमति बिना सेनाले ब्लक गरेर उता जान रोकिएएको छ । यस्ता कुराहरु त छर्लङ्ग नै छन् । न भारत यसमा इरिटेड हुन मिल्छ न त हामी उद्देलित हुनु आवश्यक छ । कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट यसको समाधान गर्न जरुरी छ । यसनिम्ति हामी त तयार नै छौं, हामीले त प्रस्ताव पटकपटक गरेकै छौं । भारत पनि यसमा तयार हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
– अब सबै उत्तिकै छन् कि छैनन् – के मापदण्डका आधारमा भन्ने ? जनताप्रति उत्तरदायी छन्, जनताप्रति उत्तरदायी भएर नै काम गरिराखेका छन् र त यी थुप्रै सकारात्मक परिणामहरु प्राप्त भएका पनि छन् । नत्र कसरी प्राप्त हुन्थ्यो यो उपलब्धि ? थ्याङ्क्यू सो मच सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू !
तपाईंले महत्वपूर्ण समय दिनुभयो । तपाई सफल प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपाली जनताको मनमा रहिरहनुस् । तपाईंको साढे दुईवर्षको कार्यकाल अझै प्रगति र उन्नतिको कार्यकाल होस् । – थ्याङ्क्यू !